Vaovao - Fibre maody tokana (SMF): Fahaizana ambony kokoa sy fanaporofoana ho avy tsara kokoa
Fibre Single-mode (SMF): Fahaizana ambony kokoa sy fanaporofoana ho avy tsara kokoa
Araka ny fantatsika rehetra, ny fibre multimode dia matetika mizara ho OM1, OM2, OM3 ary OM4. Dia ahoana ny fibre mode single? Raha ny marina, ny karazana fibre mode tokana dia toa sarotra kokoa noho ny fibre multimode. Misy loharano roa voalohany amin'ny famaritana ny fibre optika tokana. Ny iray dia ny andiany ITU-T G.65x, ary ny iray dia IEC 60793-2-50 (navoaka ho BS EN 60793-2-50). Raha tokony hiresaka momba ny teny ITU-T sy IEC aho, dia hifikitra amin'ny ITU-T G.65x tsotra kokoa ato amin'ity lahatsoratra ity. Misy karazana fibre optika tokana 19 samihafa voafaritra amin'ny ITU-T.
Ny karazana tsirairay dia manana ny faritra fampiharana azy manokana ary ny fivoaran'ny fibre optika ireo dia maneho ny fivoaran'ny teknolojian'ny rafi-pitaterana hatramin'ny fametrahana voalohany ny fibre optika tokana ka hatramin'izao. Ny fisafidianana ny tsara ho an'ny tetikasanao dia mety ho zava-dehibe amin'ny lafiny fampisehoana, vidiny, fahatokisana ary fiarovana. Amin'ity lahatsoratra ity dia mety hanazava bebe kokoa momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny famaritana ny andian-dahatsoratra G.65x amin'ny fianakaviana fibre optika tokana aho. Manantena ny hanampy anao handray fanapahan-kevitra tsara.
Ny fibre ITU-T G.652 dia fantatra ihany koa amin'ny hoe SMF (fibre mody tokana) ary ny fibre matetika ampiasaina. Misy karazany efatra (A, B, C, D). A sy B dia manana tampon'ny rano. C sy D manafoana ny tampon-drano ho an'ny asa feno spectrum. Ny fibra G.652.A sy G.652.B dia natao hanana halavan'ny onjam-pandrefesana aotra eo akaikin'ny 1310 nm, noho izany dia natao ho an'ny asa ao amin'ny tarika 1310-nm izy ireo. Afaka miasa ao amin'ny tarika 1550-nm ihany koa izy ireo, saingy tsy natao ho an'ity faritra ity noho ny fiparitahana avo lenta. Ireo fibre optika ireo dia matetika ampiasaina ao anatin'ny LAN, MAN ary rafitra tambajotra fidirana. Ny variana vao haingana kokoa (G.652.C sy G.652.D) dia manasongadina tampon-drano mihena izay ahafahan'izy ireo ampiasaina amin'ny faritra halavan'ny onjam-peo eo anelanelan'ny 1310 nm sy 1550 nm manohana ny fifindran'ny Coarse Wavelength Division Multiplexed (CWDM).
G.653 single mode fibre dia novolavolaina mba hamahana ity fifandonana eo amin'ny bandwidth tsara indrindra amin'ny onjam-peo iray sy ny fatiantoka ambany indrindra amin'ny iray hafa. Mampiasa rafitra sarotra kokoa ao amin'ny faritra afovoany sy faritra tena kely izy io, ary ny halavan'ny onjam-pandrefesana chromatic zero dia nafindra ho 1550 nm mba hifanaraka amin'ny fatiantoka ambany indrindra amin'ny fibre. Noho izany, ny fibre G.653 dia antsoina koa hoe fibre dispersion-shifted (DSF). Ny G.653 dia manana habe fototra kely kokoa, izay natao ho an'ny rafitra fifindran'ny fomba tokana lavitra amin'ny alàlan'ny erbium-doped fibre amplifier (EDFA). Na izany aza, ny fifantohan'ny hery ambony ao amin'ny fototry ny fibre dia mety hiteraka voka-dratsiny tsy misy tsipika. Ny iray amin'ireo manahirana indrindra, fampifangaroana onja efatra (FWM), dia mitranga amin'ny rafitra Dense Wavelength Division Multiplexed (CWDM) miaraka amin'ny fiparitahan'ny chromatic zero, ka miteraka fifampiresahana tsy azo ekena sy fitsabahana eo amin'ny fantsona.
Ny fanondroana G.654 mitondra ny lohateny hoe "ny toetran'ny fibre optika sy tariby optique tokana tapaka." Mampiasa habe fototra lehibe kokoa vita amin'ny silika madio izy io mba hahatratrarana ny fahombiazan'ny halavirana mitovy amin'ny fihenan'ny ambany amin'ny tarika 1550-nm. Matetika koa izy io dia manana fiparitahana chromatic avo amin'ny 1550 nm, saingy tsy natao hiasa amin'ny 1310 nm mihitsy. Ny fibre G.654 dia afaka mitantana ny haavon'ny hery ambony kokoa eo anelanelan'ny 1500 nm sy 1600 nm, izay natao indrindra ho an'ny fampiharana lavitra ambanin'ny ranomasina.
G.655 dia fantatra amin'ny anarana hoe non-zero dispersion-shifted fibre (NZDSF). Manana fiparitahan'ny chromatika kely sy voafehy ao amin'ny tarika C (1530-1560 nm), izay miasa tsara indrindra ny amplifier, ary manana faritra fototra lehibe kokoa noho ny fibre G.653. Ny fibre NZDSF dia mandresy ny olana mifandraika amin'ny fampifangaroana onja efatra sy ny fiantraikany tsy an-tariby hafa amin'ny alàlan'ny famindrana ny halavan'ny onjam-pielezana aotra ivelan'ny varavarankely miasa 1550nm. Misy karazany roa ny NZDSF, fantatra amin'ny anarana hoe (-D)NZDSF sy (+D)NZDSF. Samy manana fisondrotana miiba sy miabo mifanohitra amin'ny halavan'ny onjam izy ireo. Ity sary manaraka ity dia mampiseho ny toetran'ny fiparitahan'ireo karazana fibre fomba tokana efatra lehibe. Ny fiparitahan'ny chromatic mahazatra amin'ny fibre mifanaraka amin'ny G.652 dia 17ps/nm/km. Ny fibre G.655 dia nampiasaina indrindra hanohanana ny rafitra mandeha lavitra izay mampiasa fifindran'ny DWDM.
Ary koa ny fibre izay miasa tsara amin'ny halavan'ny onjam-peo, ny sasany dia natao hiasa tsara indrindra amin'ny halavan'ny onjam-peo manokana. Ity no G.656, izay antsoina koa hoe Medium Dispersion Fiber (MDF). Izy io dia natao ho an'ny fidirana eo an-toerana sy ny fibre zotra lavitra izay miasa tsara amin'ny 1460 nm sy 1625 nm. Ity karazana fibre ity dia novolavolaina hanohanana ny rafitra mandeha lavitra izay mampiasa CWDM sy DWDM fifindran'ny onjam-peo voafaritra. Ary miaraka amin'izay koa, mamela ny fametrahana mora kokoa ny CWDM any amin'ny faritra metropolitan, ary mampitombo ny fahafahan'ny fibre amin'ny rafitra DWDM.
Ny fibre optique G.657 dia natao hifanaraka amin'ny fibre optique G.652 saingy samy hafa ny fahombiazan'ny fahatsapan-tena. Izy io dia natao hamela ny fibre hiforitra, tsy misy fiantraikany amin'ny fahombiazany. Izany dia tratra amin'ny alalan'ny hady optique izay taratry ny hazavana manjavozavo miverina ao amin'ny fotony, fa tsy ho very ao amin'ny cladding, izay mamela ny fifohazana lehibe kokoa ny fibre. Araka ny fantatsika rehetra, amin'ny fahitalavitra tariby sy ny indostrian'ny FTTH, sarotra ny mifehy ny radius fiolahana eny an-kianja. G.657 no fenitra farany indrindra ho an'ny fampiharana FTTH, ary, miaraka amin'ny G.652 no tena ampiasaina matetika amin'ny tambajotra fibre mitete farany.
Avy amin'ny andalana etsy ambony dia fantatsika fa ny karazana fibre tokana tokana dia manana fampiharana samihafa. Koa satria ny G.657 dia mifanaraka amin'ny G.652, ny sasany amin'ireo planner sy installer dia matetika no mahita azy ireo. Raha ny marina, ny G657 dia manana radius fiolahana lehibe kokoa noho ny G.652, izay mety indrindra amin'ny fampiharana FTTH. Ary noho ny olan'ny G.643 ampiasaina amin'ny rafitra WDM, dia zara raha ampiasaina izy io ankehitriny, ary nosoloina G.655. G.654 dia ampiasaina indrindra amin'ny fampiharana ambanin'ny ranomasina. Araka ity andalana ity, manantena aho fa manana fahatakarana mazava momba ireo fibre mode tokana ireo ianao, izay mety hanampy anao handray fanapahan-kevitra tsara.